otu onu mmiri foset ụlọ ịwụ nwa
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ / WOWOW Agbọ mmiri Sink Fosets Matte Black
Matte Black Bathroom Faucet na-enye gị atụmatụ na ịdị mma otu. Arụmọrụ dị egwu na
ịke mara mma. Lọ ahịa anyị matte ojii ime ụlọ ịwụ nwa now!
Ntụziaka nwụnye 2321501B
Matte ojii ụlọ ịsa ahụ ụlọ mmiri 2321501B
Hazi ụlọ ịsa ahụ gị bụ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ. Ọ bụ ezie na ị naghị anọkarị oge na ime ụlọ ịwụ ahụ, ịnwere ike iji ebe a zuru ike maka ogologo oge, dịka ọmụmaatụ na ikuku ị na-agba. N’ebe obula, i gaghi eleda ihe okike nke ime ụlọ ịsa ahụ anya. Ọ kwesịrị ịbụ akụkụ nke ụlọ gị n'ozuzu ya, o kwesịrị oge gị iji chee ya nke ọma na usoro nke arụmọrụ yana arụmọrụ.
Ime ụlọ ịsa ahụ kwesịrị ịnye gị ihe edoziri etu esi arụ ọrụ na arụ ọrụ. Oru a bu ihe di nkpa, dika otutu oge ichoro iji ihe ndi ozo nke ulo gi. Iji maa atụ, ịsa ahụ na ichi ezé gị mgbe ị na - eme ọsọ ọsọ n’ụtụtụ. N’aka nke ọzọ, ọkachasị mgbe obi gị zuru ike, ịnwere ike ịnụ ụtọ ụlọ ịsa ahụ gị, zuru ike na ebe ịsa ahụ dịka ọmụmaatụ. Ihe dị mma maka ime ụlọ ịsa ahụ bụ, ị nwere ike itinye ihe okike gị niile n'ime ya. Enwere ọtụtụ nhọrọ mgbe ị na-achọ ụlọ ịsa ahụ, na ihe ọ bụla ị kpebiri, ị ga-enwe ọmarịcha ihe ndozi pụrụ iche nke ọ nweghị onye ọzọ nwere. Ọ bụkwa naanị gị bụ onye kere ya. Magazines nwere ike nweta mmụọ nsọ gị site na akwụkwọ akụkọ na weebụsaịtị, mana na njedebe ị bụ onye na-ekpebi etu ụlọ ịsa ahụ ga-adị.
Single oghere ime ụlọ ịwụ faịlị na ojii
Mgbe ị na-emebe ụlọ ịsa ahụ gị mara mma, ị ga-elelị mmetụta nke nsị mmiri ụlọ ịsa ahụ. Ebe ọ bụ na pọmpụ ụlọ ịsa ahụ bụ isi mmalite nke ụlọ ịsa ahụ ọ bụla, ndị mmadụ na-elele nsị mmiri gị na mbụ. Ya mere ị ga-eji nlezianya họrọ mmiri ịsa ahụ gị niile. E wezụga arụmọrụ, ịchọrọ ụlọ ịsa ahụ gị iji mee ka ọ dị mma ma gosipụta ụdị ejiji ị na-eji. Nke ahụ pụtara na ịhapụ ịhapụ ịhọrọ maka ụdị nsị mmiri ụlọ ịsa ahụ ruo na njedebe mgbe ị na-ewu ụlọ ịsa ahụ. Kwesịrị ime ka ite mmiri kichin bụrụlarị akụkụ dị mkpa maka imebe ụlọ ịsa ahụ gị.
Banyere ime ụlọ ịsa ahụ gị, ị nwere ike ịhọrọ n'ọtụtụ ụdị ụlọ ịsa ahụ. Nwere ike ịhọrọ otu aka ime ụlọ ịsa ahụ abụọ ma ọ bụ otu aka ime ụlọ ịsa ahụ. A na-akpọkwa otu obere ime ụlọ ịwụ ahụ. Isi uru dị na nsị mmiri ịsa ahụ bụ na ị ga-eji naanị otu aka jikwaa mmiri mmiri. Uru ọzọ metụtara ya na ịnwe nrụnye. Dịka ịchọrọ otu oghere, ọ dị mma iji wụnye otu oghere ime ụlọ ịwụ ahụ. Otu obere ụlọ ịsa ahụ dị n'otu oghere na-abịa n'ụdị ụdị na ụdị dị iche iche. The matte nwa ime ụlọ ịwụ na WOWOW na-enye gị ihe mara mma nke yiri nnọọ nke gooseneck na ma obi ike na pụrụ iche ụcha.
Nkecha & ọtọ matte nwa ịsa ahụ foset
Lishlọ mmiri WOWOW dị ọmarịcha ma dị arụ ọrụ nke WOWOW dị mfe ma na-adịghị agafe agafe. Ejiri tebụl ọ bụla nke ngwa ụlọ a ọfụma na-akpachapụ anya iji wee guzogide ọnyụ ọ bụla. Ya mere, ọ ga - ekwe omume mgbe niile ịsacha ma na-elekọta akwa mmiri ịwụ ahụ a na-acha oji ojii nke ọma iji mee ka ọ bụrụ ọdịdị zuru oke. Uwe ojii na-enweghị atụ na-eji akwa mmiri nke ime ụlọ ịwụ ahụ nwere anya ọhụụ nke ga-etolite ụdị akụkụ nke ụlọ ịsa ahụ ọ bụla. Agbanyeghị ị nwere ike ịchọta akwa ịsa ahụ nke ịsa ahụ maka igwe mmiri ịsa ahụ na nke ịsa ahụ gị maka ọmụmaatụ, iji wee nwee otu akụkụ jikọtara ya na ime ụlọ ịwụ ahụ.
Nnukwu mmiri ime ụlọ ịwụ ojii a na-eji akwa ojii na-eji arụ ọrụ silhouette dị arụ ọrụ 5.8 inch. Spolọ ịsa ahụ nwere ebe ị na-ahụ maka ịsacha nke ọma. Ọwa mmiri ahụ kwụ ọtọ ma kwụsie ike. Na mgbakwunye, spout a dị elu na-egbochi imebi, yabụ ị gaghị akwa uwe gị mgbe ị na-asa onwe gị na ebe ịsa ahụ. Na ngwụcha ịkwesighi ịgbatị aka gị iji rute mmiri ahụ, dịka ihe ọhụụ nke gooseneck na-enye gị mmiri ebe ịchọrọ ya. Iji mezue ihe okike gị, ị ga-ahụ ebe nkwakọ ngwaahịa gụnyere ka ọ bụrụ otu jikọtara ọnụ na ụlọ ịsa ahụ gị.
Matte ojii ụlọ ịsa ahụ ụdọ mara mma nke ịdị mma dị mma
WOWOW na-eji akụrụngwa kachasị mma maka akwa mmiri nke ụlọ ịsa ahụ ya. Facilitieslọ ọrụ mmepụta ihe nke steeti na-ekwe nkwa idozi usoro na ijikọ ihe niile dị na ya. Uclọ ịsa ahụ nke WOWOW bụ otu ihe dị mkpa maka ikike emere maka arụmọrụ kachasị. Ọbụghị n’efu n’ahịa a dakọtara na Nkwado igwe anaghị agba nchara Amerika. A na-emechi diski mmiri seramiiki nke matte nwa ime ụlọ nke WOWOW. Nnyocha na-egosi na diski ọla kọpa na-enweghị mmiri ka na-enweghị ntụpọ mgbe usoro 500,000 gasịrị.
Aka njiri aka nke WOWOW's matte black ime ụlọ ịsa ahụ na-agbanwe agbanwe nke ukwuu. Nwere ike ijikwa ọnọdụ mmiri ahụ n'ụzọ dị mfe ma ọ na-enye njide zuru ezu iji chịkwaa oke ikuku. Na mgbakwunye, akwa ụlọ ịwụ ahụ na-eji akpụkpọ anụ dị na matte nwa nwere nkwalite na-adịwanye ike ka a na-arụ otu ahụ isi mmiri site na ọla ọcha ma jikọtara ya na ngwa dị elu. Mgbe i jidere akwa batrị ojii nke WOWOW n'aka gị, ị ga-achọpụta ozugbo ọfụma ọ na-enye.
Dị ọnụ ala ọnụ ahịa matte ojii ime ụlọ ịwụ
N'iji ihe eji eme ihe di elu, WOWOW ka nwere ike inye gi matte ojii kichin oji a ka onu ahia. WOWEBUBU ụzọ mara ebe aga-azụ akụrụngwa na ọnụego ezi uche dị na ya. Nke abụọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkụkụ nke WOWOW na-ekwe nkwa nrụpụta dị ọnụ ala. N'ụzọ dị otu a ị na-erite uru na uru ndị a ma enwetara gị nke ọma site na akwa nhicha ụlọ ụlọ ịwụ mara mma nke kacha mma ị ga-ahụ. Mgbe ịzụrụ WOWOW's matte black bath faucet, ị ga-enweta ihe niile ịchọrọ iji wụnye matte black ime ụlọ ịwụ ahụ ngwa ngwa. Na agbanye na onye na-akwusi igbaputa, a na esonye uzo eji abanye 1 ma obu tinyekwara. Ga-ahụ njikọ mmiri dị gị mkpa iji mee ka nrụnye dị mfe. Falọ ịsa ahụ niile nke WOWOW na-abịa na oge ikike afọ 3 zuru ezu, ego ịkwụghachi ụgwọ ụbọchị 5 na mbufe mba ofesi!
Uru nke matte ojii ime ụlọ ịwụ ojii na a nutshell:
Black Agba ojii na-adọrọ adọrọ
 Eserese nke usoro ọgbara ọhụrụ
 Ọ dị mfe ijikọ ọnụ na ụlọ ịwụ anwụ na-acha ọcha na-acha ọcha
SKU: 2321501B Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ Tags: oche oche, lavatory foset, arịa rii
23.5 x 11.7 x 3 sentimita
14.8 sentimita asatọ